Wenger Oo Qiray Inuu Tababare U Noqonayo Xulka Qaranka England
HomeWararka MaantaWenger Oo Qiray Inuu Tababare U Noqonayo Xulka Qaranka England
Tababaraha kooxda kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Arsenal, Arsene Wenger ayaa la sheegay in uu yahay murashaxa koowaad ee ay suurtogalka tahay inuu shaqada bannaan ee xulka qaranka England qabto, kaddib markii laga caydhiyey tababarihii hore oo fadeexado hadheeyeen.
Wenger oo ciyaartii Basel kaddib ay warbaahintu weydiisay, ayaa diiday inuu meesha ka saaro inuu la wareego xulka qaranka, laakiin wuxuu ku adkaystay in uu dhamaysan doono muddada sannadka ah ee uga hadhsan qandaraaska uu kula jiro Arsenal.
Wenger oo marka uu xili ciyaareedkani dhamaado uu gebo-gaboobayo heshiiska uu kula jiro Arsenal, ayaa waxa ay warbaahinta iyo dadka ciyaaraha faalleeyaa u badinayaan in uu noqon doono tababaraha Ingiriiska, halkaas oo ay raalli kala yihiin xidhiidhka FA iyo dad badan oo kale oo aaminsan in uu ka dhigi doono waddan awood leh oo ku guuleysan kara koobka adduunka iyo koobab kale oo ay ka qatan yihiin ba.
Xidhiidhka FA ayaa si ku-meelgaadh ah waxay tababaraha xulka ugu magacaabeen Gareth Southgate oo hogaamin doona afarta kulan ee soo socda, inta horyaalka Premier League uu dhamaanayona hal kulan oo shanaad oo kaliya ayaa la ciyaari doonaa.
Wenger oo ka jawaabayey su’aasha laga weydiiyey xulka qaranka, ciyaartii Basel kaddib, ayaa waxa uu yidhi: “Haa, way jiraan wararkaas igu xidhiidhinaya England, laakiin muhiimaddaydu waa inaan mar walba kooxdan tababaro illaa dhamaadka xili ciyaareedkanna halkan ayaan joogayaa.”
Wenger oo la weydiiyey in uu sii joogi doono Arsenal marka xili ciyaareedku dhamaado, waxa uu sheegay in uu dersi doono sida ay wax u noqdaan illaa gebogebada xili ciyaareedka.
Hadalkan Wenger ayaa loo fasiran karaa in uu dhamaad yahay wakhtigiisii Arsenal, uuna u bilaabmayo waayo iyo wakhti kale oo ah in uu u digo-roganayo tababarenimada xulka qaranka England.
Serge Aurier Oo Bad-baadiyey Nolosha Moussa Doumbia Ciyaartii Isreeb-reebka Koobka Aduunka…..
Di Biagio Oo Si Ku-Meelgaadh Ah Loogu Magacaabay Tababaraha Xulka Qaranka Talyaaniga
Breaking: Petr Cech Oo Shil Gaadhi Galay
15/08/2016 Abdiwahab Ahmed